NANENINA TAMIN’NY FANONGANAM-PANJAKANA TETO NY FRANTSAY – MyDago.com aime Madagascar
Maromaro hoy ny Ct Igance, teny amin’ny Magro behoririka androany, ny hevitra voizin’ny sasany etsy sy eroa amin’izao fotoana izao. Ny sasany milaza fa ovaina ny tetezamita.. Ny sasany indray milaza fa avelao ny hilatsaka avokoa ny rehetra, ary ao ny milaza ni Rajoelina ni Ravalomanana,sns. Ny antsika hoy izy, dia tsotra ihany dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana eto ary afaka milatsaka. Tsy manana mpifanandrina politika ny filoha Ravalomanana hoy ity mpanao plitika ity, satria tsy misy mitovy aminy ny mpifanandrina eto. Izay no mahatonga ny sasany hanao Ni..Ni . Maivan-danja ny sasany ka matahotra hoy izy matoa nanao iny teny omaly iny. Nametram-panontaniana tamin’ny TGV kosa ny tenany ny amin’ny hoe : mitaky fanovana ianareo, ka inona ilay fiovana ? Ny fiovana nataonareo hoy Ignance, dia lasa ratsy lavitra noho ny teo aloha. Izay ve hoy izy ilay fiovana tadiavinareo teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Ny anat ny fiovana dia ny fialan-dRajoelina. Nambarany ihany koa fa ny antony mbola tsy hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena dia tsy mbola nivoaka ny gadra politika rehetra, tsy mbola nisokatra ny radio nakatona, tsy mbola tafaverina ny filoha Ravalomanana ary afaka milatsaka. Ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara Ralaiseheno Guy Maxime, dia nilaza fa nampanantsoin’ny frantsay Rajoelina ka izay no nandehanany tany frantsa. Amin’ity volana Septambra ity, hoy izy dia misy ny fifandimbiasana eo amin’ny fitantanana ny filankevitry ny filaminana eo anivon’ny firenena Mikambana. Noho izany dia anjaran’ny frantsay indray no mitarika izany. Raha ny vaovao marim-pototra voaray hoy Guy Maxime, dia nanenina ny frantsay noho ny fanonganam-panjakana teto amintsika satria tsy arakaraky ny noeritreretiny no nataon-dRajoelina. Tsy tongatonga ho azy hoy ny fanazavana, ireny fanambaran’ny ambasadiny ireny, amin’ny fanovana ny politikan’ny frantsay aty Afrika. Raha manenina ny frantsay dia esory eo Rajoelina. Ny anay dia tsotra hoy ity olomboantendry ity, nosoniavinay ny sorin-dalàna satria mandeha amin’ny ara-dalàna. Manana fanapahan-kevitra feno ny olom-pirenena hoy izy hitantana ny firenena. Raha hiverina amin’ny ara-dalàna i Madagasikara dia avelao hifidy malalaka ny vahoaka ary araha hiverina amin’ny iraisam-pirenena ny frantsay dia tanteraho aloha ny sorin-dalana. Namafisiny fa tsy mijanona ny tolona raha tsy tanteraka ireo fepetra notakiana nandritra ny telo taona.
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 août 2012 30 août 2012 Catégories Politique
5 réflexions sur « NANENINA TAMIN’NY FANONGANAM-PANJAKANA TETO NY FRANTSAY »
30 août 2012 à 18 h 36 min
la basse qualité monte au creneau pour amuser la galerie;les otres sont en vakantsypour jouir des recettes venant de dada
Mama sérÿ ô!esory anie io zanakao io azafady e! Eo moa e! Mama koooa oooo!
Mampahatsiahy ahy an’i zefa niantso ny reny malalany hanala an-dRa8…
Nosakanan’ny Greenpeace aho androany hoe hiady @ fitrandrandrahana solika any @ arktika…
Hita ianareo any hoy aho fa tsy hita ianareo @ resaka bois de roses any Madagasikara… tena miaro marina ny tontolo iainana ve ianareo hoy aho?
30 août 2012 à 21 h 06 min
Tena hita be hoe nanenina marina lafrantsa a!
Madagasikara izao no ambentin-dresany mangingina eo! Hany ka tsy heno mihitsy…
31 août 2012 à 14 h 04 min
Ka ny olana de na nanenina aza ny Frantsay, ireto nataony saribakoly efa namantsika ny toerany mba tsisy hahafaka azy eo, dia na hanala an-dRajoelina indray aza ny Frantsay dia ireo efa mifantsika tsy te hiala eo ka mitady mafy izay fomba rehetra hifikirana na tsy manampy intsony aza ny renimalalany,
Vita ihany ity ny transition fa aiza izao ilay tolona?
Précédent Article précédent : RAVALOMANANA NO FANALAHIDIN’NY FAMPANDROSOANA
Suivant Article suivant : LA SADC CONFIRME QUE …